Codsiga Iscasilaada Admiral Cihat Yaycı Waa La Soo Bandhigay | RayHaber | raillynews
HomeGUUDCodsiga Iscasilaada Admiral Cihat Yaycı ayaa soo baxay
19 / 05 / 2020 GUUD, Headline, DAQIIQADII MINUTE, TURKEY
codsi ku saabsan is casilaada baahiyaha jihahaatka jihaha ayaa u muuqday
Codsigii is casilaada ee Taliska Ciidamada Badda oo loo xilsaaray Taliyaha Guud ee Ciidamada, Admiral Cihat Yaycı, wuxuu ku sheegay codsigiisa is casilaadiisa, sharaf ayey ii tahay in la igu amro in la sameeyo kala soocid lamid ah midaas, ka sokow in lagu dalbado sababaha aan u maleeyay inuusan ka maarmin taageerada iyo qalalaasaha.
Go'aanka ku saabsan magacaabidda Major General Cihat Yaycı Taliyaha Guud ee Ciidamada ayaa lagu soo daabacay Jariidada rasmiga ah ee Jimcihii, uu saxeexay Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. Go'aanka kadib Yaycı maanta wuu is casilay. Bayaanka ay soo saartay Wasaaradda Difaaca Qaranka, waxaa lagu sheegay in la aqbalay istiqaaladii Admiral Cihat Yaycı.
Sharafteyda aad bay u daciifisay ”
Yaycı wuxuu adeegsaday hadalada soo socda iscasilaadiisa:
"15kii Mey 2020, waxaan wax ka bartay jagada Taliyaha Ciidanka Badda, taas oo aan ku faanayey anigoo oggolaaday madaxweynaha sare, amarka Taliyaha Guud ee ciidamada markay ahayd 16:2020 habeenimo ee 03ka May 00 aniga oo aan aqoon u lahayn Taliyaha Ciidamada Xoogga.
Farriinta ogeysiinta magacaabista ee Wasaaradda Difaaca Qaranka, "Ka bixitaan deg deg ah Navy iyo kaqeybgalka Guud ee May 18, 2020, oo ah maalinta ugu horeysa ee shaqada (badiyaa maalmaha fasaxa maamulka iyo bandoow)", ayaa la amrey.
“Ka sokow in lagu amro sababaha aan u maleynayo inuu ka maqan yahay sabab iyo taageero (maaddaama uu ka baqayo Falivari calipers), wuxuu ku faanaa sharafta uu ku amro in si deg deg ah loo sameeyo.
Dabcan, magacaabista askar ahaan waa amar waana inaan ku raacaa. Si kastaba ha noqotee, markii ugu horreysay noloshayda xirfadda, oo aan ku waday jacayl iyo farxad aad u weyn muddo 32 sano ah markii la ii magacaabay amar-bixinta, waxaa la igu soo wajahay jago xiise leh, oo ah waajibaad aan madaxdu aheyn. Xaqiiqdii, haddii laygu xilsaarey hawl kasta, kama doodi maayo oo hawsha howsha u qaban lahaa in yar. Laakiin tani maahan kiiska. Waxaan rabaa in la ii rogo bilic soo celinta bulshada oo sharafteeda wax yeelaysay. Ma aqbali karo tan. Dabeecaddayda iyo kibirka ay ku dhisantahay turki ayaan ogolaanaynin tan.
“Markii aan ahaa 13 jir, waxaan ku hanweynahay inaan qaatay dirayskeyga, oo aan waligey ku faanayey inaan xubin ka ahay, xubin nadiif ah, 40 sano shaki la’aan iyo shaki la'aan. Way iska cadahay inaanan fulin karin shaqadayda Admiral oo aan loo xilsaarin halkii aan maanta gaadhay isla markaana laga saaray shaqadiisii ​​taasoo ahayd been iyo aflagaado. Tani waa mid aad u sharafdarro. Yaanan u malayneynin in neefka turkiga uusan dheefsiin karin Admiral Turkish ah.
Waxaa intaa sii dheer, markii aan awoodi waayey inaan ka jawaabo eedeymaha aanta ah ee lagu eedeeyay shakhsigeyga inuu yahay Admiral mas'uul ah iyo dadka buugta wax ka qora ee arintan aad uga careysiiyay shaqsigayga, qoyskeyga iyo asxaabteyda kale.
Anigoo ah Sarkaal Ciidamada Badda ah, sanado badan ayaan la dirirayay duufaano aad u culus oo ka dhacay Blue Homeland. Illaa iyo hadda, waxaan isku dayay inaan abuuro wacyigelin ku saabsan xuquuqdeena badaha iyo danahayaga u dhexeeya Qaranka Turkiga anaga oo ka wacyigelinayna Blue Homeland, iyo in aan go'aamiyo aagagga aan xukumayo badda. Waxaan isku dayay inaan umada Turkiga u aqoonsado ciidamada badda ee Turkiga ayna ku faani karaan.
“Mar alla markii ay lagama maarmaan noqoto, waxaan danaynayay in aan diyaar u noqdo heerka ugu sareeya waxaan marwalbana diyaar u ahay howlaha loo xilsaaray heerka ugu sarreeya si aan u ilaaliyo xuquuqda iyo danaha Qaranka Turkiga markii loo baahdo. Waxaan qaatay mabda'a ah badbaadinta qalin kasta oo ka mid ah Qaranka Turkiga inta ay gaarsiisan tahay awoodda.
Waxaan sii waday halganka aan kula jiray xubnaha Ururka Argaggixisada Fethullah, kaas oo ku bilaabay rabitaanka Madaxweynaheena muddo dheer kahor isku daygii afgambi ee khiyaanada ahaa ee ay FETÖ qaaday bishii Luulyo 15, 2016. Mahadsanid wanaag Waan ku guuleystey arintaan, waxaan sifiican uga fahamsanahay farxada khaa'imiinta maanta.
"Sidan oo kale ayaan u qoray buugga waxaanan hordhigay fikradihiisii ​​ku saabsana taageerada sharci ee xuquuqda badaha oo waxaan isku dayay inaan ilaaliyo danaha Turkiga. Aniguba, sidoo kale, waan fahansanahay in aan maanta ahay guule, waxay ku nool yihiin nolol ka fiican farxadda cadaawayaasha cadawga Turkiga.
"Necip Turkishness iyo calanka aqoonteyda oo dhan sidii jeceyl qaali ah oo ay uxiseeyeen shacabka Turkiga iyo degenaanshaha dalalkii u dhaxeeyay Turkiga iyo Liibiya oo la saxiixday Noofambar 27, 1919" Xukunka badda ee Xusuusta Xaddididda "in loo diyaariyo kaabayaasha aragtida guud ee is-hoosaysiinta shaqsiyan aniga shaqsi ahaan" Biladda Madax-bannaanida. Waa sii jiri doontaa.
Waxaan uga tagaa buugaagtaydii aan u qorey taliyayaasheyda, asxaabtayda askarta ah, ciidamada badda iyo ciidanka Qaranka Turkiga inay yihiin dhaxalka fikradeyda xirfadeed, waxaanan iska saaraa labiskayga aan ku labbisto sharaf anigoo sharaf leh si aan u qaado wadaniga sharafta leh ee Turkiga.
"May 19, 2020" Xuska Ataturk, Maalinta dhalinyarada iyo Isboortiga "taas oo loo dabaaldegayo maalinta nolosha rayidka iyada oo maalintaas farxadda leh ay tahay Qaranka Sare ee Jamhuuriyadda iyo Jamhuuriyadda Turkiga in la maqlo iyagoo daacad u ah rayidka sida aad ubaahan tahay waxaanan sii wadi doonaa inaan u adeego goob kasta oo aan fursad ku sifeynayay bixinta ogolaanshaha is casilaadayda. Waan jeclaan lahaa.
Codsiga Diidmada ee Channel-ka Istanbul
Codsiga Baskan Soyer ee Channel Istanbul
Jaamacadda Ottoman oo lagu soo bandhigay Hawlaha Kaabayaasha
Ujeedada ugu weyn ee weerarka ee Jarmalka ayaa soo baxay
Waxyaabaha aanan ka ogaanin Tareenada: Tareenka ugu horreeya wuxuu soo baxay natiijada sheegashada
Dabagalka Shilalka Metrobus ee Bakirkoy oo la soo bandhigay (Video)
Faahfaahin ka soo baxday Channel Channel ayaa muuqday (Video)
Taliska Ciidamada Badda